Balwisana nokubulawa kwabantu besifazane | News24
LAST UPDATED: 2019-07-16, 16:15
Balwisana nokubulawa kwabantu besifazane
Ithimba laKwaNyuswa elizimisele ngolwisana nokubulawa kwabesifazane. isithombe: sithunyelwe
ITHIMBA lentsha laKwaNyuswa limele iKwaZulu-Natal emhlanganweni obuse East London lapho benikwe inselelo yokulwisana nokubulawa kwabantu besifazane nokudlwengulwa kwezaguga emphakathini abasuka kuwo.
Leli thimba lifundisane nentsha eqhamuka ezindaweni ezehlukene ngezindlela zokulwa nezinkinga ezenzeka emiphakathini yalo.
Lomhlangano ubuhlelwe yinhlangano ebizwa ngokuthi yi-eActivater e-East London. Le nhlangano ikhethe leli thimba ukuba lisebenzisane nezikole eziKwaNyuswa lapho lizoba nezinhlelo ezahlukahlukene kanye nokufundisa intsha ezikoleni ngamalungelo ayo nezindlela zokulwa nokuhlukunyezwa nokudlwengulwa kwabantu besimame.
Okhulumela leli thimba uMnuz Sbusiso Nzama uthe: “Ngesikhathi sinalemihlangano kuningi esikubonile nesikufundile ngokuhlukunyezwa kwabesifazane nokungafundiseki kwabantu
“Njengokuthi uma kukhona isigameko esehlekele owesifazane kumele lolodaba balubike emaphoyiseni noma ezinhlanganweni ezilwisana nobugebengu emphakathini. “Ngithole ukuthi imfundiso oyithola ekhaya ibalulekile ngoba idlala indima enkulu emilweni yakho.
“Loluhlelo luhlose ukugxila kakhulu ezinganeni nakwi zaguga ngoba yibona abahlukumezeke kakhulu emphakathini.”
Uqhube wathi leli thimba lizimisele ekusizeni umphakathi futhi lizo qinisekisa ukuthi linikeza intsha ulwazi abaludingayo.
Uthe lokhu bazokwenza ngokubabisana nezinhlangano ezahlukene ezibhekelela ukulwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane.
“Kumele kuphele ukubulawa nokuhlukumezeka kwabantu besifazane yisikhathi sokuletha ushintsho nokuthula.
Uma uthanda ukuthi leli thimba livakashele esikoleni sangakini noma emphakathini osuka kuwona xhumana noMnuz Nzama enombolweni ethi:073 911 9912.